I-Newbridge - IntoKildare
INewbridge isemaphethelweni eCurragh Plains futhi iboshwe yiBog of Allen kanye nePollardstown Fen. Le ndawo yaziwa kakhulu ngokuzalanisa amahhashi ase-Ireland, ukuqeqeshwa nokugijima ngakho-ke akumangazi ukuthi eduze namapulazi amaningi e-stud kanye neCurragh Racecourse. Idolobhana landa ngokushesha ngemuva kokwakhiwa kweCurragh Camp ngo-19th ikhulu leminyaka. Idolobhana, elisosebeni loMfula i-Liffey, cishe laziwa kakhulu ngokuba yikhaya laseNewbridge Silverware abenza izinto zokusika lapha kusukela ngo-1934 futhi muva nje linesikhungo sezitolo esikhulu kunazo zonke e-Ireland - iWhitewater. Amadolobhana athule ase-Athgarvan, Kilcullen nase-Allen aseduze kanye nenkundla yegalofu endala, iRoyal Curragh. Futhi uma ulalelisisa, i-Curragh Plains kanye ne-Hill of Allen eseduze ixoxa izinganekwane zika-St Brigid, na-Fianna kanye no-Dan Donnelly.
Izindawo zokudlela eziphuma phambili e-Newbridge
Funda okungakumbi ngo- Newbridge